Watch Football & Sports LIVE - အင်တာနက်မှ ဘောလုံးပွဲကြည့်ရန် - Myanmar in Singapore
Watch Football & Sports LIVE - အင်တာနက်မှ ဘောလုံးပွဲကြည့်ရန်
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသတာဖြစ်တဲ့အတွက် Live ကန်သည့်အချိန်မှသာ ကြည့်လို့ရပါမည်။ ထို့အပြင် Connection ကောင်းဖို့လည်းလိုပါသည်။
Comment by oneway on September 13, 2013 at 11:52am မန်ယူနဲ့ ဘာစီ ကန်တဲ့ပွဲကြည့်ချင်တယ်ဗျာ မရှိဘူးလားဗျာ
Comment by HtunKyaw on October 8, 2012 at 6:16pm AFF Suzuki cup link- http://www.ustream.tv/affsuzukicup Comment by Han Shwe Oo on October 8, 2012 at 12:54am မြန်မာပွဲတွေကြည့်လို့မရဘူးလား ခင်ဗျား။
Comment by Aung ST on June 26, 2012 at 11:57pm http://www.youtube.com/watch?v=1VTLIz5XTnA Comment by Aung Aung on March 4, 2012 at 9:32pm မြန်မာ - စင်ကာပူပွဲ ကြည့်လို့ ရတဲ့ link မရှိဘူးလားဗျာ
ပထမပိုင်း ၀-၀ ဟုသိရကြောင်းပါ Comment by Aye Khaing on January 20, 2012 at 2:41am ခုလိုအစီစဉ်လေးတွေထပ်သိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ် Comment by thesun on January 8, 2012 at 11:16pm ချယ်ဆီးပွဲ လင်. မရှိဘူးလား ဗျ Comment by Hanni Myo Aung on December 18, 2011 at 12:05am အထက်က ဒီလောက်ဘဲ မြန်နိုင်မယ်တဲ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့-----------------
Comment by ko min aung on December 17, 2011 at 6:05am thankalot to m in s for watchf& sports live program
Comment by Thein Zaw on November 18, 2011 at 8:40pm အစီအစဉ်တွေကောင်းသလောက် connection မကောင်းတာခက်တယ်ဗျာ Comment by Nang Ying Kham on October 29, 2011 at 8:46pm ကြည့်ချင်လိုက်တာ ခုကန်နေတဲ့ပွဲတွေကို လိုင်းမကောင်းတော့ကြည့်လို့လည်းမရဘူး
Comment by kaung myat on October 27, 2011 at 12:37am ဒီလိုဘောပွဲတွေကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ကျွှန်တော်အတွက်တော့အကောင်းဆုံးnetwork တစ်ခုပါပဲ... Comment by rocket007 on September 24, 2011 at 11:54pm Install fire fox in ur computer , and then open fire fox then go to http://myanmarsingapore.com/football?commentId=2316969% Comment by myo myint on September 24, 2011 at 10:36pm thanks alot Comment by AUNG SAN MYINT on September 24, 2011 at 5:37pm I tried, but invain.Pl help by anymeans. Comment by amaethar on September 15, 2011 at 2:24am ကော်နရှင်ကြောင့်လည်းဆိုင်တယ်ထင်တယ်..ကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲlive တွေကိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်..
ကြည့်လို့ရပါတယ်.. Comment by Saw Htin on September 11, 2011 at 2:31am I was waiting at least two min but also I haven't see anythings.
Comment by amaethar on August 28, 2011 at 1:08am ဘောလုံးပွဲတွေကိုlive ကြည့်လို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်.... Comment by wai phyo on August 25, 2011 at 4:24pm ဘာစီလိုနာ ပရိတ်သတ်များ အတွက် Comment by thetpaingsoe on June 14, 2011 at 5:52pm nice programme